अमेरिकी चलचित्रमा स्वस्तिमासंगै केकी अधिकारी ! कति लिदैछन् पारिश्रमिक? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Online Nepal
अमेरिकी चलचित्रमा स्वस्तिमासंगै केकी अधिकारी ! कति लिदैछन् पारिश्रमिक? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
May 10, 2020 4438
नायिका स्वस्तिमा खड्काले अमेरिकन चलचित्रमा काम गर्दैछिन् । अमेरिकन चलचित्र निर्माण पक्षले अङ्ग्रेजी भाषामा निर्माण गर्न लागेको चलचित्रमा स्वस्तिमा अनुबन्धित भएकी हुन् । यस चलचित्रमा स्वस्तिमाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने छिन् । स्वस्तिमासँगै यस चलचित्रमा नेपालबाट अर्की नायिकाले पनि काम गर्ने भएकी छिन् । उनी हुन्, केकी अधिकारी ।
केकी पनि चलचित्रको लागि अनुबन्धित भइसकेकी छिन् । निर्माण पक्षसँग केकीको लिखित सम्झौता पूरा भइसकेको छ । बुझिएअनुसार चलचित्रमा स्वस्तिमा र केकी दिदी-बहिनीको भूमिकामा प्रस्तुत हुनेछन् ।केही समय अगाडि नेपाल आएको चलचित्रको टिमले अडिसनबाट नै स्वस्तिमा र केकीलाई छनोट गरेको हो।
स्वस्तिमा र केकीसँगै अन्य केही नायिकाहरुले पनि अडिसन दिएका थिए ।चलचित्रको निर्माण पक्षको विषयमा भने अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन । चलचित्रमा अन्य कलाकार भने अमेरिकन नै हुने बुझिएको छ । चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन पनि अमेरिकामा नै हुनेछ । को रोनाको त्रा स सकिएलगत्तै चलचित्रको छायांकन सुरु हुनेछ । हेर्नुहोस् भिडियोः
Prevकोरोना सन्क्रमित भएको बेलासेबारे आयो यस्तो खबर
Nextविश्वका लागि सुखद खबर ,कोरोना भाइरस आफै कमजोर बनेर छिट्टै हट्ने संकेत
१ महिनाको सुत्केरी चिउरा खादै बन्द कोठामा, यस्तो कसैलाई नपरोस (भिडियो सहित)
पुनर्नियुक्तिबारे धेरै हल्ला चलेपछि कुलमान घिसिङले गरे यस्तो आग्रह (पूर्णपाठ)
नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछी बल्ल सरकारले चाल्ने भयो यस्तो कदम।